Qoyks iska leh Manchester United oo fariin soo gaarsiiyey Jose Mourinho kuna yiri Xiddigaas waa lama taabtaan Waa kuma? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Qoyks iska leh Manchester United oo fariin soo gaarsiiyey Jose Mourinho kuna yiri Xiddigaas waa lama taabtaan Waa kuma?
(13-10-2018) Qoyska iska leh kooxda Manchester United ee Glazer family ayaa lacadeeyey in ay fariin digniin ah soo gaarsiiyeen Macalinka Naadigaas Jose Mourinho fariintaas oo ay u soo marsiiyeen Maamulaha kooxda Ed Woodward.
Glazer family ayaa u sheegay Jose Mourinho in Cayaaryahanka dalka France ee Paul Pogba uu yahay lama taabtaan isla Markaana aan laga iibin karayn koox kasta oo lacag soo bandhigtay iyaga oo sidoo kale ka dalbaday Macalinka Portugal in uu dhalmeeyo qilaafka kala dhexeeya Pogba weliba si deg deg ah.
Wargeyska Mundo Deportivo ayaa daabacay in qoyska iska leh inta badan sheerka Manchester United oo ah qoy ka soo jeeda dalka Maraykanka ay doonayaan in aan lataaban Paul Pogba oo dhawr jeer ay isku dheceen Jose Mourinho isla Markaana ay dooneyso Barcelona waxaana hadalka ka soo yeeray loo arkaa mid u sheegaya Mourinho in uu isagu bixi doono halkii uu ka bixi lahaa Paul Pogba.
Hadalka ay adeegsadeen Glazer family waxaa ka mid ahaa Paul Pogba waa Lionel Messiga Manchester United waana lama taabtaan lamana iibin karayo lacag kasta oo lasoo bandhigo sidaa daraadeed waa in Jose Mourinho u aqoonsadaa sida aan sheegnay.